Artificial Intelligence (AI) နှင့် Digital Marketing ၏တော်လှန်ရေး | Martech Zone
ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်လူတိုင်း၏အဓိကဖြစ်သည် အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးမရ။ ၎င်းကိုရောင်း ၀ ယ်မှု၊ အမှတ်တံဆိပ်အသိအမြင်တိုးရန်နှင့်ဖောက်သည်သစ်များရောက်ရှိရန်သုံးသည်။
သို့သော်ယနေ့စျေးကွက်သည်ပြည့်နှက်နေပြီး ecommerce လုပ်ငန်းများသည်ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုအနိုင်ယူရန်အပြင်းအထန်ကြိုးစားအားထုတ်ရပါမည်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး၊ သူတို့ကနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာခေတ်ရေစီးကြောင်းတွေကိုခြေရာခံပြီးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းစနစ်တွေကိုလည်းလိုက်နာသင့်တယ်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သောနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတီထွင်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ဉာဏ်ရည်တု (AI) ့။ ဘယ်လိုလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
ယခုအချိန်တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်အတော်လေးရိုးရှင်းပုံရသည်။ Ecommerce လုပ်ငန်းများသည်စျေးကွက်ရှာဖွေသူတစ် ဦး ကိုငှားရမ်းနိုင်သလိုလူမှုကွန်ရက်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ အခပေးကြော်ငြာများကိုကိုင်တွယ်ခြင်း၊ လွှမ်းမိုးမှုရှိသူများကိုငှားရမ်းခြင်းနှင့်အခြားအရောင်းမြှင့်တင်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်မည့်အဖွဲ့တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ecommerce စတိုးဆိုင်များတွင်အခက်အခဲရှိနေသောအရေးကြီးကိစ္စအချို့ပေါ်ပေါက်လာသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် Customer-Centric Approach ကိုလွဲချော်သည် -၀ ယ်သူကို ဦး တည်နေခြင်းသည်လုပ်ငန်းတိုင်း၏ပန်းတိုင်ဖြစ်သင့်သည်။ သို့သော်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များစွာသည်ဤစိတ်ကူးကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးသူတို့ကိုယ်သူတို့၊ သူတို့ရဲ့ ROI နှင့်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအာရုံစိုက်နေကြသည်။ ထို့ကြောင့် ၀ ယ်သူစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းသည်မရေမရာဖြစ်နေပြီးကုမ္ပဏီများသည်နောက်ပိုင်းတွင်ဖြေရှင်းရန်ဆုံးဖြတ်လေ့ရှိသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ဒါကကြီးမားတဲ့အမှားတစ်ခုပါ။ ယနေ့ကမ္ဘာတွင် ၀ ယ်သူသည်သူတို့မည်မျှထိုက်တန်ကြောင်းကိုသိပြီး piggy bank များကဲ့သို့ဆက်ဆံခြင်းကိုမကြိုက်ပါ။ ၀ ယ်သူဗဟိုပြုချဉ်းကပ်မှုမရှိလျှင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်သစ္စာရှိသောဖောက်သည်အခြေခံကိုဖန်တီးရန်နှင့်ပြိုင်ဘက်များထက်အပြိုင်အဆိုင်ရရှိလာသည်။
Big Data ပြဿနာတွေရှိတယ် - အောင်မြင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဖောက်သည်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းကို Ecommerce စတိုးပိုင်ရှင်များသိသည်။ ဖောက်သည်ဒေတာစုဆောင်းခြင်းသည်ဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေပြီးထို့ကြောင့် ၀ င်ငွေတိုးစေသင့်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ကြီးမားသောဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများနှင့်မကြာခဏရင်ဆိုင်ရသည်။ ၎င်းသည်သူတို့ကိုစီမံခန့်ခွဲရာတွင်ပိုမိုအထောက်အကူပြုနိုင်သောအရေးကြီးသတင်းအချက်အလက်များကိုလက်လွတ်စေသည် အပြုအမူစျေးကွက်ရှာဖွေရေး.
အမေရိကန်အတိုင်ပင်ခံနှင့်စာရေးဆရာ Geoffrey Moore ၏စကား၌
အချက်အလက်ကြီးကြီးမားမားမရှိသောကုမ္ပဏီများသည်အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်တွင်သမင်ကဲ့သို့ ၀ က်ဘ်ပေါ်သို့ပျံဝဲနေကြသည်။
Geoffrey Moore၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောထုတ်ကုန်များကိုခေတ်စားသောဖောက်သည်များအားရောင်းချသည်
အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုပြသနာများသည်အမှန်ဖြစ်သည် အကြောင်းအရာမပါဘဲဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမရှိတာကအမှန်ဘဲ။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အသိအမြင်တိုးတက်စေရန်၊ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်စိတ် ၀ င်စားမှုတိုးတက်စေရန်အကြောင်းအရာများသည်အရေးကြီးသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်အသုံးအများဆုံးအကြောင်းအရာများတွင်ဘလော့ဂ်ပို့စ်များ၊ ဆောင်းပါးများ၊ လူမှုရေးအဆင့်မြှင့်တင်မှုများ၊ တွစ်တာများ၊ ဗွီဒီယိုများ၊ တင်ပြချက်များနှင့် ebook များပါဝင်သည်။ သို့သော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်မည်သည့်အကြောင်းအရာသည်အကျိုးကျေးဇူးအများဆုံးရစေနိုင်သည်ကိုမသိပါ။ သူတို့ကသူတို့ဝေငှတဲ့အရာတွေကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးရုန်းကန်ပြီးအကောင်းဆုံးကိုအာရုံစိုက်နေမယ့်အစားအကုန်လုံးကိုတစ်ပြိုင်နက်ဖုံးဖို့ကြိုးစားနိုင်တယ်။
အခကြေးငွေပေးသောကြော်ငြာများသည်အမြဲတမ်းရိုးရှင်းသည်မဟုတ် - အချို့ ecommerce စတိုးပိုင်ရှင်များသည်၎င်းတို့တွင်စတိုးဆိုင်ရှိပြီးကတည်းကလူများလာကြသော်လည်းများသောအားဖြင့်အခပေးကြော်ငြာများမှလာလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကအခပေးကြော်ငြာများသည် ၀ ယ်သူများကိုမြန်မြန်ဆွဲဆောင်ရန်လုံခြုံသောနည်းလမ်းတစ်ခုဟုသူတို့ထင်ကြသည်။ သို့သော်လည်းအောင်မြင်သူများကဤအရာကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်လိုလျှင်ကြော်ငြာများကိုပိုကောင်းအောင်နည်းလမ်းသစ်များအမြဲစဉ်းစားသင့်သည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အခြားရှုထောင့်သည်စာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရလဒ်များအတွက်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများကိုစနစ်တကျပုံစံချပြီးကိရိယာအားလုံးတွင်အလုပ်လုပ်ရမည်။ သို့သော်လည်းများစွာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်၎င်းတို့၏ပင်မစာမျက်နှာကို Landing Page တစ်ခုအဖြစ်သုံးရန်ဆုံးဖြတ်သော်လည်း၎င်းသည်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းမဟုတ်ပါ။
Email Optimization မကောင်းပါ - ထုတ်ကုန်များကိုမြှင့်တင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုမှာအီးမေးလ်စျေးကွက်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့်အတူ ecommerce လုပ်ငန်းများသည် ၀ ယ်သူတစ် ဦး ကိုတိုက်ရိုက်ချဉ်းကပ်နိုင်ပြီးပိုမိုမြင့်မားသောပြောင်းလဲမှုနှုန်းရှိသည်။ အီးမေးလ်များသည်လမ်းပြများနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုတိုးတက်စေပြီးအနာဂတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အတိတ်ဖောက်သည်များအတွက်သုံးနိုင်သည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်အီးမေးလ်များ၏ပျမ်းမျှဖွင့်နှုန်းသည်တစ်ခါတစ်ရံအလွန်နည်းသည်။ ထို့ကြောင့်လက်လီအရောင်းဖွင့်နှုန်းသည် ၁၃%ခန့်သာရှိသည်။ ကလစ်နှုန်းများသည်အတူတူဖြစ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးတွင်ပျမ်းမျှအီးမေးလ် CTR သည် ၂.၆၅%ဖြစ်ပြီးရောင်းအားကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေသည်။
AI ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များ ကံကောင်းစွာဖြင့်၊ ယနေ့ခေတ်နည်းပညာကိုအထက်ဖော်ပြပါပြဿနာအားလုံးအားဖြေရှင်းရန်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်တွင်သုံးနိုင်သည်။ AI နှင့်စက်သင်ယူခြင်းကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် content ဖန်တီးခြင်းအတွက်နည်းလမ်းများစွာဖြင့်သုံးနိုင်သည်။ ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
Personalization ပိုကောင်းရန် AI - နောက်ဆုံးပေါ်လမ်းကြောင်းများကိုခြေရာခံသောထို ecommerce စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ၀ ယ်သူသည်စာမျက်နှာပေါ်ရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် AI ကိုသုံးနိုင်သည်။ သုံးစွဲသူအားလုံးတူညီသည်မဟုတ်၊ နှင့် AI အမှတ်တံဆိပ်များသည်အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
တည်နေရာပေါ်မူတည်ပြီးထုတ်ကုန် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုပေးပါ
ယခင်ရှာဖွေမှုများနှင့်သော့ချက်စာလုံးများအပေါ် အခြေခံ၍ အကြံပြုချက်များပေးပါ
ဧည့်သည်ကို အခြေခံ၍ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းအရာကိုပြောင်းပါ
စိတ်ခံစားချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက် AI ကိုသုံးပါ
ecommerce personalization ၏အကောင်းဆုံးဥပမာသည် အမေဇုံကိုယ်ပိုင်၎င်းသည် developer များအား Amazon ကဲ့သို့ machine learning နည်းပညာကို သုံး၍ app များကိုဖန်တီးခွင့်ပြုသည်။
Big Data Analysis အတွက်အစွမ်းထက်သော Tools များ -ဖောက်သည်ဗဟိုပြုမဟာဗျူဟာကိုဖန်တီးနိုင်ရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်မှန်ကန်သောဖောက်သည်အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်စီစစ်ခြင်းများလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ AI ဖြင့်ဒေတာစုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည် ပို၍ လွယ်ကူသည်။ ဥပမာ၊ မှန်ကန်သော AI tool သည်မည်သည့်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားကိုအများဆုံး ၀ ယ်သည်၊ မည်သည့်စာမျက်နှာများကိုအများဆုံးကြည့်ရှုသည်နှင့်ဆင်တူသည်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ AI သည် ၀ ယ်သူခရီးတစ်ခုလုံးကိုခြေရာခံနိုင်ပြီးရောင်းအားတိုးတက်စေရန်မှန်ကန်သောဖြေရှင်းချက်ကိုပေးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Google Analytics ဖြင့်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတွင် ၀ ယ်သူ၏အပြုအမူကိုကြည့်နိုင်သည်။
အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုအတွက်အွန်လိုင်း AI ပလက်ဖောင်းများ AI သည်အကြောင်းအရာနှစ်ခုဖြင့်အသုံးအများဆုံးပြသနာနှစ်ခုကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်၊ အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုကိုအရှိန်မြှင့ ်၍ အကြောင်းအရာအပေါ် ၀ ယ်သူတုံ့ပြန်မှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သည်။ အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုနှင့်ပတ်သက်လာရင်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်လူမှုရေးပို့စ်များအတွက်အမှတ်တံဆိပ်ပုံများ၊ ဆောင်းပါးအတွက်ခေါင်းစီးများ၊ ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုရေးရန်သို့မဟုတ်အရောင်းမြှင့်တင်ရန်ဗီဒီယိုတစ်ခုဖန်တီးရန်ကူညီနိုင်သောအွန်လိုင်း tool များစွာရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ AI ပါ ၀ င်သောဆော့ဝဲသည်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအားလူ ဦး ရေစာရင်းထက်ပိုမိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ကူညီနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ၀ ယ်သူများ၏အမူအကျင့်နှင့်လူမှုမီဒီယာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ အချို့ ဥပမာများတွင် Sprout Social ပါဝင်သည်၊ Cortex၊ Linkfluence Radarly စသည်။
AI သည်အွန်လိုင်းအရောင်းမြှင့်တင်ရေးများကိုလွယ်ကူစေနိုင်သည် - ယခုအချိန်တွင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်အခြားပလက်ဖောင်းများစွာသည်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများကို၎င်းတို့၏ကြော်ငြာများကိုလွယ်ကူစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်ကူညီပေးမည့် AI ကိရိယာများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကြော်ငြာများမပျက်စီးပါ။ တဖက်တွင်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်ကြော်ငြာ optimization ပိုမိုလွယ်ကူစေသောသတင်းအချက်အလက်မျိုးစုံကိုရယူနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ငြားလည်း, Facebook သည် AI ကိုသုံးသည် အဲဒီကြော်ငြာတွေကိုပစ်မှတ်ပရိသတ်ဆီချက်ချင်းပို့ပေးတယ်။ ထို့အပြင် Landing Page သည်ကြော်ငြာများအပြင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္မှပါ ၀ င်သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအကောင်းဆုံးစာမျက်နှာကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းသည်ကြီးမားသောခြားနားချက်ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ AI သည်ထူးခြားသောဆင်းသက်စာမျက်နှာ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုကိုကူညီနိုင်သည်။ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းနှင့်ဒီဇိုင်း.
အီးမေးလ်ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ရန် AI - အီးမေးလ်စျေးကွက်သည်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့် AI သည်အီးမေးလ်များကိုမည်သို့ဖန်တီးပုံကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ နောက်ထပ်ဘာတွေရှိသေးလဲ၊ အရည်အသွေးရှိသောအီးမေးလ်များကိုပို့ရန် AI ကိုသုံးနိုင်သည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး ၀ င်ငွေတိုးစေပါ။ ယခုအချိန်တွင် AI စွမ်းအင်သုံးကိရိယာများသည်လုပ်နိုင်သည်။
ဤကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်အဖွင့်နှင့်ကလစ်နှုန်းများကိုတိုးစေပြီးရောင်းအားပိုများစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင် AI chatbots များကိုစာတိုပေးပို့ခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းများတွင် သုံး၍ ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်အဆုံးစွန်သောကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကိုပေးနိုင်သည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်လုပ်ငန်းတိုင်းအောင်မြင်မှု၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ecommerce စတိုးဆိုင်များသည်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ပိုများလာသည်၊ ထိုလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်စိန်ခေါ်မှုများစွာနှင့်ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကြောင်းအရာများဖန်တီးခြင်းသည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဖြစ်လာနိုင်ပြီးကြီးမားသောဒေတာများကိုကိုင်တွယ်ရန်မှာမဖြစ်နိုင်ပုံရသည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ ယနေ့ခေတ်တွင် AI ပါ ၀ င်သောကိရိယာများစွာသည်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများကိုသူတို့၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ၀ င်ငွေပိုကောင်းစေသည်။ တိုးတက်သောအီးမေးလ်များမှရိုးရှင်းသောအွန်လိုင်းအရောင်းမြှင့်တင်မှုများအထိ AI သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုပြောင်းလဲရန်စွမ်းအားရှိသည်။ ၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအရာ - ၎င်းသည်ကလစ်အနည်းငယ်သာကွာသည်။
ထုတ်ဖော်: Martech Zone ဒီဆောင်းပါးမှာ Amazon Affiliate link တစ်ခုရှိတယ်။
Tags: aiai chatbots ပါဥပမာများai ပလက်ဖောင်းများai ဖြေရှင်းချက်ai ကိရိယာများamazon ကို personalize လုပ်ပါဉာဏ်ရည်တုကြီးမားတဲ့ data တွေကိုကြီးမားသောဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအမှတ်တံဆိပ်အသိအမြင်ချက်တင် bot တွေဟာကလစ် - မှတဆင့်နှုန်းထားများအကြောင်းအရာဖန်တီးမှုဖောက်သည်ဗဟိုပြုဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအီးမေးလ် ctrအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာရင်းဇယားအီးမေးလ်ပိုကောင်းအောင်Facebook aiGeoffrey Mooreသစ်လွင်မှုအွန်လိုင်းပရိုမိုးရှင်းပွင့်လင်းနှုန်းထားများလစာကြော်ငြာများpersonalizationppcseo အဆင့်startupbonsai
Isaja Karadakovska သည် Pol-Sci ဘွဲ့ရ၊ Junior Researcher ဟောင်းတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးလက်ရှိ TakeATumble ၏ အကြောင်းအရာညှိနှိုင်းရေးမှူး သူမသည်ကြီးကျယ်သောအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဖန်တီးရန်မောင်းနှင်သည်။ သူမ၏အားလပ်ချိန်သည်သူမ၏အပင်စွဲလမ်းမှုအတွက်ရည်စူးသည်။
JQuery ကို သုံး၍ Google Analytics ဖြစ်ရပ်များတွင် Elementor ပုံစံတင်ပြချက်များကိုမည်သို့ခြေရာခံမည်နည်း